Qarax miino oo Lala Beegsaday Ciidamo katirsan Dawlada Somaliya (Xagee ka dhacay?)
Home Somali News Qarax miino oo Lala Beegsaday Ciidamo katirsan Dawlada Somaliya (Xagee ka dhacay?)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in duhurnimadii qarax xoogan lala beegsaday gaari nuuca dagaalka oo ciidamada saarnaayeen.
Wariye kusugan Afgooye ayaa waxa uu Midnimo.Com usheegay in qaraxa oo ahaa nuuca miinada dhulka hoostiisa lagu aaso islamarkaana la hareer mariyey gaariga C/billaha ahaa ee ciidamada dawlada Somaliya saarnaayeen.
Rasaas ay ciidamada dawlada fureen qaraxa kadib ayaa waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa 2 qofood oo rayid ah kuwaasi oo dhaawacooda uu fudud yahay laguna dabiibayo cusbitaalka degmadaasi.
Qaraxa oo ka dhacay Xaafada Embagaati ee degmada Afgooye kutaalla ayaa waxay ciidamadu sameeyeen qaraxa kadib howlgal ay ku baadi goobayeen qaraxa miino waxaana lagu soo waramayaa in dad aan lagu soo qaban howlgalkaasi.
Afgooye oo katirsan gobolka Sh/hoose ayaa waxa deggan dad beero falato ubadan waxaana maalmihii dambe kusii kordhayey falalka amni daro,xalay ayaa ugu dambeysay markii qarax bambaano lagu tuuray ciidamo katirsan DF.
Xaalada goobtii qaraxa uu salaadii khudbada kadib ka dhacay degmada Afgooye ayaa iminka ah mid deggan waxaana lagu soo waramayaa in dadka ay isku socodkoodii dib usoo laabtay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Wafdi uu hoggaaminaayo oo ay...
Maxkamad ku taala Kenya oo Soomaali dambi ku weysay [Sabab]